Hopin: Goob Virtual Ah Oo Loogu Kaxeeyo Ka Qaybgalka Dhacdooyinkaaga Internetka | Martech Zone
In kasta oo xiritaanku ay keeneen dhacdooyin muuqaal ah, haddana waxay dardargelisay aqbalaadda dhacdooyinka internetka. Tani waxay muhiim u tahay shirkadaha inay aqoonsadaan. In kasta oo dhacdooyinka shakhsiyadeed ay u badan tahay inay u laaban doonaan sidii iib muhiim ah iyo kanaal suuqgeyn ah oo loogu talagalay shirkadaha, waxay sidoo kale u badan tahay in dhacdooyinka farsamada ay sii wadi doonaan inay noqdaan kuwo la aqbali karo oo ay noqdaan kanaal muhiim ah sidoo
In kasta oo aaladaha caadiga ah ee shirarka dalxiisku ay bixiyaan aalad loo hirgelin karo in lagu yeesho hal kulan ama websaydhyo, aaladahaas ayaa ka gaabiyey bixinta guud ahaan barnaamij ka kooban dhammaan astaamaha a. shir dalwaddii. Saaxiibkeyga wanaagsan Jack Klemeyer la wadaagay aalad ay shirkaddiisa tababarenimo ka faa'iideysanaysay si ay uga beddesho shirarka sannadlaha ah ee shakhsiyadeed una gudbo mid farsamo… Hopin
Hopin: Goobta Virtual Ee Dhamaan Dhacdooyinkaaga
Hopin waa goob dalwad ah oo leh aagag badan oo is-dhexgal ah oo loogu talagalay isku xirka iyo ka-qaybgalka. Kaqeybgalayaashu way u guuri karaan ama ka bixi karaan qolalka sida dhacdo qof-qof ah waxayna ku raaxeysan karaan waxyaabaha iyo isku xirnaanta aad u sameysay iyaga.
Hopin waxaa loogu talagalay inay ku celiso khibrad dhacdo oo qof ah, kaliya iyada oo aan la helin caqabadaha safarka, goobaha, cimilada, warwareega aan fiicnayn, baarkinka, iyo wixii la mid ah. Hopin, ganacsiyada, jaaliyadaha, iyo ururadu waxay la xiriiri karaan dhagaystayaashooda caalamiga ah, waxay isugu imaan karaan hal meel, waxayna kadhigi karaan dhacdo aad u weyn oo khadka tooska ah laga dareemayo inay yartahay markale.
Astaamaha Hopin waxaa ka mid ah
Jadwalka Dhacdada - waxa dhacaya, goorma, iyo qeybta la raacayo.
Reception - bog soo dhaweyn ama u ololaynta dhacdadaada. Halkan waxaad si dhakhso leh uga ogaan kartaa waxa ka dhacaya munaasabadda hadda.
tababarka - ilaa 100,000 oo kaqeybgalayaashu way xaadiri karaan bandhigyadaada ama furahaaga muhiimka ah. Si toos ah u tabin, ciyaaro waxyaabaha horay loo duubay, ama u sii mari RTMP.
KAL- - ilaa 20 kaqeybgale ayaa hal shaashad kuwada jiri kara iyadoo boqolaal kaqeybgalayaashu ay daawanayaan kuna sheekaysanayaan kal-fadhiyo aan xadidnayn oo isku mar socon kara. Kufiican wareegyada wareega, mashaariicda, ama wadahadalada kooxda.
Liiska Hadalka - dhiirrigeli cidda ka hadlaysa munaasabadda.
Networking - Awood otomatiga hal-hal kulan oo awood u leh inuu u oggolaado laba ka-qaybgale, ku hadla, ama iibiyeyaashu inay yeeshaan wicitaan fiidiyoow ah.
chat - sheekada dhacdada, sheekaysiga masraxa, sheekaysiga kal-fadhiga, sheekaysiga waababka, wada sheekaysiga kulanka, sheekaysiga dhabarka, iyo farriimaha tooska ah dhammaantood waa la isku daray. Farriimaha ka imanaya qabanqaabiyeyaasha ayaa la dhejin karaa waxaana lagu muujiyey aqoonsiga fudud ee ka soo qayb galayaasha.
Waabab Exhibitor - ku dar kafaalayaasha kafaala-qaadayaasha iyo wada-hawlgalayaasha meesha ay dhacdooyinka ka bixi karaan soco si ay u booqdaan waababka ay xiiseynayaan, la falgalaan iibiyeyaasha, oo ay tallaabo ka qaadaan. Qol kasta oo dhacdadaada ka mid ah wuxuu ka koobnaan karaa fiidiyow toos ah, waxyaabo summad leh, xiriiriyeyaal Twitter ah, fiidiyowyo horay loo duubay, dalabyo gaar ah, iibiyaasha kaamerada nool, iyo badhanka CTA-yada loo habeeyay.
Calaamadaha kafaalaqaadka - astaamo la riixi karo oo u keenaya booqdayaasha websaydhyada kafaala qaadayaasha.
Iibka Tigidhada - tigidh isku dhafan iyo ka shaqeynta lacag bixinta oo lala socdo koontada baayacmushtarka Stripe.
URL-yada gaagaaban - Sii kaqeybgalayaasha hal-riix gelitaan kasta oo kamid ah dhacdooyinka Hopin.
Hopin waa madal munaasibad hal-hal ah loogu talagalay isku xirka dadka ku hadla, kafaala qaadayaasha, iyo ka soo qayb galayaasha. Abaabulayaashu waxay ku guuleysan karaan yoolalka isku midka ah ee dhacdooyinka qadka tooska ah iyaga oo u habeeya dhacdooyinkooda Hopin si ay ugu habboonaadaan shuruudaha, haddii ay tahay munaasabad qorista 50-qof, 500-qof oo dhammaan gacmaha ka shiraya, ama shir sannadeedka 50,000-qof.
Hesho Demo Hopin
Tags: dhacdo chatqolka soo-bandhiggahopinshirarka internetkadhacdooyinka internetkaliiska ku hadlakarbaashiibinta tigidhkaWicitaanada videoExpo dalwaddii